Etu ịhọrọ eserese maka ime ụlọ: mepụta ngwakọta zuru oke n'onwe gị
ebe obibi » ozi » Ihe osise dị na ime nke ulo
Human ọchịchọ mma - abụghị ihe ọhụrụ. Na prehistoric ugboro,, nna nna anyị hà chọrọ mma mgbidi ọgba petroglyphs: n'ihi ya, ọ nwere a eke ọchịchọ obibi gị mma, mara mma. Ugbu a, Otú ọ dị, mesie expressiveness nke ime style, ga-aghọ akụkụ nke echiche imewe na nanị tinye ụfọdụ agba na gburugburu ebe obibi nwekwara ike mgbidi eserese. Ezi nkà gbanwee ukwu kemgbe oge ochie: enwetara a ọhụrụ udi na ụdị, ma nọgidere na mbụ ọrụ. ka, egosipụta ọrụ - inye aesthetic ụtọ.
Contemporary sere na n'ime ime, murals, tụrụ atụ, picture mejupụtara, "Na na ndụ" n'ime ụlọ gị. Site ugbu a na ọnọdụ ga-akwụsị ruo mgbe ebighị ebi na-agba ntụ na-agwụ ike.
N'ihi na ụfọdụ n'ime ime sere - zuru okè nhọrọ?
E nweghị ndị na mgbochi. Visual Arts - a ọma adianade classic-style obibi, minimalist studio ụlọ, ulo ke ẹbọ nke "ime ulo" na-abụghị ọkọlọtọ ụlọ ọrụ na-enweghị otu n'ime ime echiche.
abụghị mkpa, Ma ị na-arapara n'ahụ onye style na mma, ma ọ bụ na-ahọrọ a okike ọgba aghara - mgbidi osise n'ime ime ga-adị n'ekpere. Ma isi ihe n'ebe a - iji mepụta kwekọrọ, site na-ahọpụta ndị kwesịrị ekwesị style na pụtara nke nhọrọ. Nweta a modicum nke pụrụ ichetụ n'echiche, ị ịga nke ọma!
Olee otú ịhọrọ a sere na n'ime ime: iwu nke zuru okè Nchikota
Nri Nchikota - dị nnọọ mkpa karị, karịa na-ezukọ na anya. N'ụzọ kwesịrị ekwesị họọrọ amụba na-enyere aka ezi gbanwee ụlọ:
Ibuga aghụghọ atụmatụ ime style, tinye nkọwa ndị doro;
Mepụta a na-egbuke egbuke ngwoolu agba, ịdọrọ uche;
Iji mee ka ụlọ gburugburu ebe obibi ọzọ iche;
Anya mụbaa ohere, ma ọ bụ na Kama - tinye coziness na ụlọ bụ kwa oké ọchịchọ.
Ndị isi ihe ị na-ahọrọ:
Amụba ga-esoriri style n'ime ime, nyefee general "ọnọdụ" ụlọ, ahụ doziri.
Nhọrọ nke na agba bụ omume na ụzọ abụọ - site iche na nke na-achị na ụkpụrụ nke nuances. Ke akpa idaha, picture - a-egbuke egbuke ntụpọ na ụlọ tint, Nke abụọ amụba ọcha kwekọrọ na agba na mma ụlọ, ịghọ otu na ya.
Hà na ọnụ ọgụgụ nke mmeputakwa ga-ahọrọ dị ka size nke ihe ndị ọzọ n'ime ụlọ. Ka ihe atụ,, na isi nke a oke bed ga-ele anya uru ndokwa nke nnukwu eserese, mgbe, dị nnọọ ka a obere amụba "ga-efu" n'ime onodu nke ọnụ ọgụgụ.
Cheta: sere n'ime ime nke ulo - a echiche nke gị àgwà, ọhụụ nke aesthetics. Nke ahụ bụ echiche nke ịma mma, kwekọrọ - mgbe niile kasị mkpa nhọrọ ibiere. Ma mgbe ahụ - Atụmatụ, na iwu na dị ka mmebe.
Otu ihe nke picture
Ịchị zuru okè etiti: ọ ga-n'otu oge jikọtara na n'ime ime ụlọ na-mesie aesthetics nke mmeputakwa - ya omimi, agba saturation, n'ọnọdụ. Ya mere, ọ dịghị eluigwe na ala obibia - nnwale na anya n'ihi na na variant, na bụ gị chọọ.
A ole na ole imewe Atụmatụ, aka ikpebi:
Abstract na avant-garde osise anya oké enweghị a etiti - nwere ike n'enweghị a gbahapụ. karịsịa, ma ọ bụrụ na ime nke ụlọ, Ọ ga n'ụlọ eserese, na a dịkọrọ ndụ style.
tụrụ atụ, pastel na watercolor ọrụ a ga-enịm n'okpuru iko. Mma ruru eru antiglare: otú reproductions ga-ele anya oké na mgbede, Mgbe oriọna.
mmanụ ime ihe nwere ike esịne ke etiti, enweghị iji iko.
Council: manye etiti-achọ naanị a classic sere na interiors nke ụlọ. Ma nke a na-achị nwere ike ileghara anya, ma ọ bụrụ na foto anya anya mma enweghị etiti ma iko.
ugoloọma, okwukwa, nnụnụ
Olee otú ka mma kpọgidere a picture
Iji bulie ma na-eme ndokwa aesthetically ẹnamde amụba - bụ naanị ọkara agha. Gị ọzọ ozi - ikike edebe ya na mgbidi nke ụlọ. Ọ dị mkpa ka n'ime akaụntụ:
akụkụ foto: reproductions nke nnukwu nha anya ọma na-esote arọ, ọnụ ọgụgụ ngwá ụlọ, miniature - nnọọ iche.
amụba udi. Iji warara nkebi uwe vetikal picture, ka izugbe ebe nso na isi nke bed - kwụ kwaaji.
ndabere. The kasị mma "ndabere" maka ihe ọ bụla amụba - otu na-acha mgbidi.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ kpọgidere otu mgbidi a ole na ole reproductions, na-elekọta ha mara mma Nchikota. Na-arịọ "sere n'ime ime foto"I nwere ike ịhụ na nza nke na-akpali ulo nhọrọ.
The frescoes n'ime ime nke ulo: Ị Mkpa Ịmata
classic mural – Great n'ihi na kichin, ndụ ụlọ, bedrooms na ọbụna ime ụlọ ịwụ. Otú ahụ ka onye ọzọ imewe nke mgbidi bụ otu n'ime ndị kasị ochie: Ọ maara BC. Otú o sina, murals n'ime ime Anyị agaghị efu mkpa:
The mural na mgbidi na-asa ahụ ike ihe ikuku nke ntụrụndụ. Ebe a na-ezigbo eke motifs - Green, okooko osisi, ọhịa Okirikiri.
Na kichin, anyị nwere ike ikwu ebe a mural na iri table ebe. The ụkpụrụ nwere ike gbakwunyere si ịkpụzi etiti, ji achọ nkume. Nke a ga-ike na mmetụta nke ẹkụre, ịtụ mejupụtara.
Izgolov'em mural n'elu bed, Mere na pastel shades, Ọ bụ zuru okè ẹkụre ime ime. N'ebe a kwa, ihe kwesịrị ekwesị jụụ, eke ebumnobi - ha na-atọrọ ka mfe ma zuru ike. Gbakwunyere mejupụtara nwere ike ìhè ntụpọ, emi odude ke elu onu nke fresco. Nke a ga-ike a visual mmetụta nke mgbasa nke ohere, nke dị mkpa karịsịa maka kọmpat, obere ụlọ.
Ime nke ulo, a ụzọ chepụta mgbidi ga-enyere mesie n'ozuzu style ulo, ike a adabako na coherent picture.
The ndụ ụlọ, mural nwere ike mara mma zuo ezu osisi panelingi. Mkpebi a n'ụzọ dị irè na-achọ na ụlọ, mma na a kpochapụwo ịke.
Modern mural na-adị mfe etinyere mgbidi: Ọ bụ a web, nke na-ọma mmasị ọ bụla n'elu. Ka ịmepụta a eke, ndụ picture nwere ike họrọ 3d-mural.
Ihe osise dị na a oge gboo ọnọdụ
Ọ bụ ike iche n'echiche a classic ime enweghị ọkaibe reproductions na mgbidi! Agbara ọcha na akụkọ ihe mere eme style nwere ike advantageously gbakwunyere Okirikiri, ka lifes na osise ke ẹbọ nke nsiridi. impressiveness, mma nke osise n'ụzọ zuru okè mee oke etiti - tụrụ ma ọ bụ stricter, enweghị enweghị isi ji achọ ọcha.
The neoclassical ime na-achọkwa na mfe osise, nke a na-adịkwaghị anụ ụlọ ma ọ bụ n'obodo ndị mepere emepe motifs. Maka aha dịtụ mfe osisi, ọkacha mma na ìhè, obi ụtọ na anya shades.
Council: ekwesịghị ịhọrọ kwa ọchịchịrị, gbarụọ eserese. The ama echesinụ oge gboo ime ga-ele anya ezi gbarụọ. Nịm na ọnọdụ na ihe na-egbuke egbuke!
Ihe osise dị na a n'oge a n'ime ime
Abstract osise na-enwu gbaa na agba - a ezigbo godsend maka minimalist, mfe n'oge a interiors. Ga-ekwesị graphic contours, crisp edoghi, ụfọdụ iche. Anyị na-akwado na-ahọrọ na-ekpo ọkụ na agba: ha ga-jupụta ụlọ a homey na-eche obodo mepere emepe.
cheta: mkpa nke oge a n'ime ime picture enweghị ihe ọ bụla ọzọ na-ndebanye. Kasị modernistic reproductions anya oké enweghị okpokolo agba na iko.
Jighi elu-tech n'ụzọ zuru okè complemented nwa-na-na-acha ọcha osise nke nnukwu akụkụ. The mejupụtara nke ọtụtụ ndị a na eserese ike ihe ikuku nke izu okè, mfe nkasi obi. banyere ihe oyiyi, mgbe ahụ, e kwesịrị merie obodo mepere emepe motifs - mepere emepe Okirikiri nke nnukwu obodo, reproductions nke ọrụ nke oge a ije. Ọzọkwa mkpa graphic osise.
Enwe na-eso gị onwe gị uto
... a – Otu ikpeazụ n'ọnụ, anyị chọrọ inye gị taa. Mgbe niile, ọbụna na-niile imewe iwu na usoro, e nweghị eluigwe na ala usoro, otú họrọ art maka ime. Gbalịa iche iche na-eru nso, Atụla egwu nke na-abụghị ọkọlọtọ ngwọta, Ịmụta ihe ọhụrụ na-emekarị - mgbe kwekọrọ na ịma mma eze gị ime. Anyị na-achọ na ị na a ezi n'ike mmụọ nsọ kwa ụbọchị!